XOG:- Sababta rasmiga ah ee keentay dib u dhaca ku yimid xilliga doorashadda Aqalka Sare ee baarlamaanka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Sababta rasmiga ah ee keentay dib u dhaca ku yimid xilliga doorashadda Aqalka Sare ee baarlamaanka
Iyadoo maanta ay ahayd xilliga ay maamul gobaleedyadda dalka kusoo gudbiyaan liiska xubnaha ka mid noqanayo Aqalka Sare ee Baarlamaanka federaalka cusub ee Soomaaliya ayaa taasi u muuqata mid aanay ilaa iyo haatan dhaqan gelin.
Guddiga doorashadda dadban ee heer federaal ayaa horey u shaaciyay inay maamul gobaleedyadda dalka laga doonaya in bishaan September 25-keeda soo gudbiyaan xubnaha xildhibaanda ee uga mid noqonayo Aqalka Sare ee Baarlamaanka federaalka.
Arrintaasi ayaa u muuqata mid ay maamuladaasi dhag jalaq u siiyeen waxayna taasi keentay inuu dib u dhaco jadwalkii ay dejiyeen guddiga doorasahada dadban ee heer federaal.
Warar hoose aynu hordhac u helnay ayaa sheegaya in dib u dhacaasi ay sabab u yihiin qodobadda soo socda:-
Arrinta dhismaha maamul gobaleedka Hiiraan iyo Sh/dhexe oo ilaa iyo haatan aan weli la dhisin, islamarkaana lasoo xuli karin xubnihii u matali lahaa Aqalka Sare ee baarlamaanka cusub Soomaaliya.
Odayaal dhaqameedyadda, waxgaradka iyo siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho kana soo jeeda deegaanada Somaliland oo aan weli ku qanacsanayn saami qeybsiga labada Aqal ee baarlamaanka.
Iyo sidoo kale maamuladda Puntland, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo aan weli si rasmi ah usoo gudbinin liiska xildhibaanadda u matalayo Aqalka Sare ee baarlamaanka.
Dhinaca kale, waxaa waqtiyadda soo socdo la filayaa in guddiga doorashadda dadban ay shaaciyaan sababaha rasmiga ee ka dambeysay dib u dhaca ku yimaaday liiska xubnaha ka mid noqanayo Aqalka Sare ee Baarlamaanka federaalka cusub ee Soomaaliya.
Guddigaasi ayaa sidoo kale shaacin doonno in doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya la qaban doono 30-ka bisha November ee sanadkaan 2016-ka, taas oo markii hore la filaayay inay dhacdo bisha soo socota ee October 30-keeda.